Antony fitsangatsanganana irery | Vaovao momba ny dia
Manao fampiharana amin'ny fahatsoram-po avy amiko, mpamaky anay, hilazako fa tsy fantatro tsara raha manoratra an'ity lahatsoratra ity aho handresy lahatra anao voalohany, handresy lahatra ny tenako na izy roa. Ary tena misalasala izy ireo, tahotra be loatra rehefa mandeha mitsangantsangana izay manome fahatokisana sy fanajana sasantsasany. Manamboatra sy manaja izany saika matetika aho, farafaharatsiny raha ny momba ahy, miafara amin'ny ratsy izany ary amin'ny "aza mandeha".
Ary ianao? Mandeha irery ve ianao matetika? Tiako ny karazana fanehoan-kevitra momba an'io fanontaniana io ary raha misy fanahy manosika ahy hanosika ahy lavitra, raha azo atao, hanao dia irery, tsara kokoa ...
Voalaza fa nanangona maromaro aho antony mandeha irery na irery; ho ahy, ho anao ary ho an'izay mila azy betsaka na mihoatra ahy. Raha vakiany dia tsy maintsy milaza aho fa vitsy izy ireo ary tena tsara. Avelako miaraka amin'izy ireo ianao!
Antony fitsangantsanganana irery farafaharatsiny indray mandeha amin'ny fiainanao
Hanana fahatsapana fahalalahana tanteraka ianao, tsy mbola nahatsapa toy izany teo aloha.
Fa maninona SATRIA tsy tokony hampamoahin'olona na iza na iza ianao, na amin'ny fandaharam-potoana, na amin'ny fitsidihana, na amin'ny zavatra hafa mihitsy. Ianao no manapa-kevitra amin'ny fotoanao, ny lalanao, na hifoha iray andro mialoha na aoriana, sns. Hanao izay tianao amin'ny fotoana mahaliana anao indrindra ianao.
Handresy ny tahotrao sy ny tsy fandriam-pahalemana ianao.
Efa nolazainay tao amin'ny fehintsoratra voalohany amin'ity lahatsoratra ity. Matetika ny tahotra sy ny tsy fandriam-pahalemana no manakana antsika tsy rehefa mandeha irery ihany fa rehefa manao izay notadiavintsika hatry ny ela ary aza sahy na inona na inona antony. Ny fitsangatsanganana irery no manaparitaka ireo fetra ireo ... Satria "fanazaran-tena" izay mahatonga anao hiantehitra irery amin'ny tenanao, ny fahafahanao, ny fahaizanao mampifanaraka ... Inona no fomba tsara kokoa handravana ny tahotrao manokana noho ny fitetezam-paritany?
Heveriko fa namaky an'ity hevitra ity aho, tsy mila antony bebe kokoa ... Saingy, manohy izahay!
Hitombo ny fahalalanao tena sy ny fatokisanao tena.
Manirery hanana fotoana be dia be hieritreretana isika: mieritreritra ny fiainana efa nitarihantsika izao, ireo sakana efa vitantsika ary ireo hafa nahatonga antsika ho tafintohina, momba ireo fisedrana sendra antsika teny an-dàlana izay mety hahatonga antsika hahavery ny hery fotsiny manandrana hatrany fa matoky tena ihany koa.
Ity teboka ity dia mifandray akaiky amin'ilay teo aloha. Rehefa hitantsika fa afaka manomboka sy mamarana ny dia samirery isika, tsy misy fanampiana, avy amin'ny orinasa fantatra, izay nankafizinay koa, dia nahita toerana vaovao ary nesorinay, izany fahalalana izany momba ny tenanay manokana sy ilay tena- fahatokisan-tena dia nitombo an'arivony izy ireo.
Hankafy ny "fanirery" marina sy salama isika.
Matahotra ny manirery ny olona maro, mitokana, ... Ny sasany dia satria tsy fantany izay hatao rehefa mankaleo izy ireo, ny hafa kosa noho ny "olana" taloha, sns. Na inona na inona antony, ny mandeha irery dia fotoana mety "hahitana indray" ny fahatsapana ho manirery ary ho tsapanao fa tsy dia ratsy toa ny nandoko azy io.
Mitokana irery rehefa hanana ny fotoana rehetra eto amin'izao tontolo izao isika hanao izay tiantsika rehetra, satria tsy mila mifanaraka amin'ny fitakiana na "fampiononana" an'ny mpiray dia aminy hafa isika.
Hiaina traikefa tsy hay hadinoina ianao.
Nilaza izy ireo fa loha roa no mieritreritra mihoatra ny iray, ary ny mandeha ianao dia hitarika anao hiaina fotsiny toe-javatra tsy azo antoka sy tsy ampoizina tanterakaSatria tsy hanana an'io lohateny fisainana hafa eo akaikinao io ianao afaka manome "fanampiana" anao amin'ny fotoana sasany. Ny sasany mety tsy dia mahafaly tanteraka (toy ny very amin'ny fotoana iray, tsy mahita ilay trano na tsangambato tadiavinao, sns), fa ny sasany kosa ho tonga tahaka izany. tantara nifanesy fa raha vao miverina amin'ny dia ianao dia hahatsiaro azy ireo miaraka amin'ny tsiky mahafinaritra eo amin'ny tavanao.
Tsy maintsy mitarika ny sainao sy ny safidinao fotsiny ianao.
Rehefa handeha hitety vondrona iray isika, mila mampifanaraka ny safidin'ny tsirairay sy ny tiany foana isika. Omeko ohatra iray ianao: aleon'ny namanao Juan mijanona ao amin'ny hotely, fa ny sakaizanao Laura kosa maniry bungalow kely eo afovoan'ny natiora ... Saingy, Inona no tadiavinao? Raha mandeha irery ianao dia tsy hanahy fotsiny momba izay tadiavinao amin'ny lafiny rehetra: karazana gastronomia, karazana fonenana, karazana làlana hitsidihana (literatiora, tsangambato, natiora, sns.).
Avelao any aoriana ny zava-drehetra!
Mialà amin'ny zavatra rehetra sy ny olon-drehetra: vonoy ny findainao, henoy ny fahanginana ary avelao ho entin'ny zavatra angatahan'ny vatanao aminao amin'ny fotoana rehetra ianao. Io no fomba tsara indrindra hialana sasatra sy hiala amin'ny fanazaran-tena mandratra sy mampijaly anao. Mitondrà fakantsary jiro, kahie misy penina mba hanondroana ary kely fotsiny ... Enga anie ny fotoana iainanao amin'io dia io dia hahalona anao loatra ka hanery anao hamerina ny tenanao amin'ny hery sy ny fahatsapana bebe kokoa.
Misy antony 7 ny fitambarany ... Tsy dia maro izy ireo, tsy vitsy, nefa mieritreritra aho fa izy ireo no tena ilaina mba hiatrehana io dia solo-tahotra natahotra io. Ary ianao? Resy lahatra anao ve aho? Ho aiza no ho nalehanao manaraka?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Antony fitsangantsanganana irery
Est dia hoy izy:
Iray ihany aho no nandeha irery, satria fotoana fohy taorian'ny nanombohako mampiaraka ny vadiko ary efa miara-dia izahay. Fa ny tena marina dia zavatra amporisihiko amin'ny rehetra izy io. Mitsangatsangana any Madrid, izay tsy mbola nalehako. Natory tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny niaraka tamin'ny tovovavy frantsay hafa tsara tarehy aho. Tsidiho izay rehetra kasainao hotsidihina, miaraka amina fiadanam-po faran'izay tsy mila maika na miadana ... amin'izay vitako ihany. Ary nisy renibeny iray tao El Retiro nahita ahy niaraka tamin'ilay sari-tany ary nanomboka nitantara tamiko momba an'i Madrid nandritra ny fotoana kelikely ary avy eo dia lasa naka ny zafikeliny. Nisy andro iray koa, rehefa tsara ny andro ary niafara nandry tamin'ny ahitra nandritra ny adiny iray mahery aho, ary rehefa naniry aho dia nitsangana ary lasa. Ary ny amin'ny sakafo dia nihinana aho rehefa tena noana sy izay nahitako ny lovia tena tadiaviko.
Heveriko fa raha te-hivezivezy ianao, amin'ny ankapobeny, ankoatry ny fizarana dia amin'ny olon-kafa, farafaharatsiny mba mila mandeha irery ianao.
Mamaly an'i Est